भान्सामा छ सौन्दर्यको १२ खजना – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित १७ कार्तिक २०७७, सोमबार १७:४०
अनुहार एवं छालाको चमक कसरी बढाउने ? दागधब्बा कसरी हटाउने ? चाहुरीपन कसरी कम गर्ने ? आफ्नो सौन्दर्यलाई कसरी कायम राख्ने ? यसका लागि बजारमा उपलब्ध महंगा कस्मेटिक्स नै जरुरी छ भन्ने हुन्न । पार्लर धाउनेपर्छ भन्ने पनि छैन । हाम्रो घर–आँगन र भान्सामा यस्ता चिज छन्, जसले अनुहार एवं छालालाई मुलायम, चम्किलो र सफा बनाउन सहयोग गर्छ ।
एन्टीअक्सिडेन्टले भरपुर हुने कारण टमाटरले ब्लिच क्रिमको जस्तै काम गर्न सक्छ । यसको पेस्ट बनाएर १५ मिनेटसम्म अनुहारमा लगाउनुहोस् । त्यसपछि मनतातो पानीले सफा गर्नुहोस् । दैनिक यस्तो गर्नाले तपाईंंको अनुहारबाट दागधब्बा गायब हुन्छ ।
दुध र बेसारलाई मिसाएर ५–१० मिनेटसम्मा अनुहारमा लगाउनुहोस् र फेरि पानीले यसलाई सफा गर्नुहोस् । यसले तपाईंलाई निख्रिएको र बेदाग छाला मिल्छ ।
बेसन, बेसार र दही मिसाएर गर्धन र शरीरमा मसाज गर्नुहोस् र फेरि यसलाई सुक्न दिनुहोस् । १४–२० मिनेटसम्म लगाएर त्यसपछि नुहाउनुहोस् । सातामा एक पटक यस्तो गर्नाले गर्धनको कालोपना हराउँछ ।
८. दुध र गुलावजल
छालालाई स्वस्थ र चमकदार बनाउनको लागि कागतीको रसमा दुध र गुलाबजल मिसाएर दैनिक अनुहारमा लगाउनुहोस् ।
जाडो याममा ड्राइफ्रुट्स
संसदको विशेष अधिवेशन : कांग्रेस भन्छ बोलाइहालौं, नेकपामा द्विविधा
बनेपामा इनडोर स्टुडियो निर्माण गर्ने घोषणा